မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ခုနှစ်တွင် 2020? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ > မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ခုနှစ်တွင် 2020?
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ
Eco ဖော်ရွေခရီးသွား ကြှနျုပျတို့သညျဤသစ်ကိုဆယ်စုနှစ်ထဲသို့မဝင်ရသောကြောင့်စိတ်ထဲတွင်၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောရောဘတ် Swan နှင့်အမျှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူ Greta Thunberg, ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည်လင်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေပါသည်. ကျနော်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေအချိန်ထဲက run နေနှင့်သူမ၏အဖိုးတန်သယံဇာတများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေကြသည်.
ပြောင်းလဲမှုကိုယနေ့စတင်များနှင့်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ, ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန် တာဝန်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း. ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာငါတို့သက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးသတိဖြစ်လာသကဲ့သို့ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ခရီးသွား အစပျိုး, ကျနော်တို့နေဆဲစဉ်းစားလေ့ Eco ဖော်ရွေခရီးသွား အရမ်းကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောနဲ့. တာဝန်ရှိခရီးသွား ကျနော်တို့ကဒီမှာနှင့်လည်းစားသုံးဖို့ရှေးခယျြနိုငျမရှိတော့တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလိုအပ်ချက်များကိုအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝသို့ယက်ခံရဖို့ရာတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်, ဒုတိယသဘောသဘာဝဖြစ်လာ.
ဒါဟာအပြုသဘောလမ်းကြောင်းသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးတိုးတက်သောလှိုင်းတံပိုးအောင်နေသည်. ခရီးသွားထူထောင်မှုအတွက်မိတ်ဆက်ကြသည် နေရောင်ခြည်၏ပါဝါ, ရေပြန်လည်စနစ်များကိုစားသုံးမှုနှင့်ပလပ်စတစ်အတိတ်၏ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအသုံးပြုမှုဖြစ်လာလျှော့ချရန်အကောင်အထည်ဖော်ပြီ. မြင့်တက်ခြင်းနှင့်တစ်ခုပေါ်မှာလေးနက်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်, မျှော်လင့်ချက်နှင့်ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အတူ, insatiable ခရီးသွားများအတွက်၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှအပြုသဘော echo ပါလိမ့်မယ်. ဤတွင်မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ပေါ်မှာငါတို့ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များများမှာ:
ရထားခရီးသွားခြင်း၏ bygone ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
အတော်များများကခရီးသွားများအတွက်လျော့နည်းပျံဖြင့်သို့မဟုတ်လုံးဝလေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုကိုထုတ်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်မိမိတို့၏ကာဗွန်ခြေရာကိုလျှော့ချဖို့ရှေးခယျြ, အများစုဆှီဒငျ buzzword တုံ့ပြန် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ရှကျရှံ့ခွငျး (လေယာဉ်ခရီးစဉ်အရှက်ကွဲခြင်း). ဒါဟာလေကြောင်းခရီးသွားယခုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာမျှဝေသူတစျဦးဖွစျသညျမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်. ပျံအမြဲကျနော်တို့ခရီးသွားဖို့ရွေးချယ်ပုံကိုတစ်ဦးအရေးပါသောကစားသမားဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, ကျနော်တို့ခရီးသွားကမ်းလှမ်းမှုကိုစိတ်လှုပ်ရှား၏အခြားပုံစံများကိုသတိပေးခံရဖို့လိုအပ် Eco အားလပ်ရက်.
မီးရထားခရီးသွားလာ ကျေးဇူးတရား ambiance bygone တစ်လွမ်းဆွတ်ရှိပြီးတစ်ဦးသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့် Eco ဖော်ရွေခရီးသွား ပဏာမခြေလှမ်း. ဒါဟာပိုပြီး legroom အပါအဝင်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း, လှပတဲ့ရှုခင်းခံစားနေစဉ်ထမင်းစားခန်းကားထဲတွင်ညစာစား, ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွား ဝေးပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ချိတ်ဆက်နေဖို့လိုသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်, လေယာဉ်ခရီးစဉ် mode မှာအဘယ်သူမျှမရှိ. မီးရထားခရီးသွားလာရန်ပြတ်ပြတ်သားသားနှိုင်းယှဉ်ထားသည် တာဝန်ရှိခရီးသွား.
Eco Friendly ဖြစ်, သာလျှင်ခြေရာများ Leave
ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျနော်တို့ခရီးသွား, သာခြေရာချန်ထားသင့်တယ်. Eco ခရီးသွားများအတွက်အဖြစ်, ကျနော်တို့ပြီးသားကိုသင်တို့သိကြ၏. သို့သျောလညျး, ဤအခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုပိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တစ်ဦးခြေလှမ်းနောက်ထပ်ဒီယူနိုင်ပါသည်. ကြည့်ဖို့ဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာခရီးသွားများအတွက်အတူတကွပူးပေါင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကျွန်တော်ရှာတွေ့ထက် destination သို့ထွက်ခွာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကျွန်တော်တစ်ဦးကမ်းခြေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်သစ်တောထဲမှာမြင်သောအမှိုက်အနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းတက်ကောက်ဖို့ဘာမျှမကုန်ကျ. ထို့အပြင်, ထိုသို့စွန့်မှန်ကန်စွာသမုဒ္ဒရာ၌ထဆင်းသက်ပါဘူးဆိုလိုသည်.
ဒေသခံသည်တစ်ဦးသာထောက်ပံ့ Eco ဖော်ရွေခရီးသွား ပဏာမဒါပေမယ့်လည်းအသိုင်းအဝိုင်းထင်ရှားသောအလှူငွေဖြစ်ပါသည်. ဒေသအလိုက်ဝယ်ယူဘယ်သူမှသူတို့အားကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုလိုသည်. ပို. ပင်, ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှင်သန်ရန်အခွင့်အလမ်းများ. ဒါဟာလျှော့ချကာဗွန်ခြေရာကိုနှင့်ဒေသခံရပ်ရွာလူထုအနိုင်ရရှိဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ Eco Friendly, Conversation ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်
ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးကလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာ. တစ်ဦး Eco ခရီးသွားမှကျူးလွန်အဖြစ် Eco ဖော်ရွေခရီးသွား အခြေခံမူ, ကျွန်တော်ဇာတ်ကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အသံကိုအာဏာရှိသည်. ကျွန်တော်သူချင်းခရီးသွားများအတွက်နှငျ့ဆကျသှယျအဖြစ်နှင့်ကျနော်တို့ကကမ္ဘာလုံး၏ထူးခြားသောထောင့်မှခရီးအဖြစ်. ကျနော်တို့သတင်းစကားကိုဖြန့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကျနော်တို့သာဓကအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုဤလိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်စေကျနော်တို့အထောက်အကူပြုဘယ်လိုအဖြစ် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ကျနော်တို့အတူတူလုပ်ဖို့အခြားသူတွေလာအောင်နှိုးဆွ.
ထိုသို့လုံခြုံရေးပတ်သတ်ပြီးပြုခံရဖို့ပထမဦးဆုံးနှင့်သုတေသနလိုအပ်ချက်မှာ unappealing ပေါ်လာနိုင်ပေမဲ့ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့်နေရာများ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကူးအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Eco ဖော်ရွေ လှည့်ပတ်သွားလာလမ်း. ဒါဟာကားတစ်စီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါခရီးသည်တစ်ဦးလျှင်လောင်စာတစ်ခုအကြီးအကျယ်လျှော့ချငွေပမာဏကိုအသုံးပြုသည်.
တစ်ဦးကဦးတည်ရာကိုမျုိးတို့အားလက်ကကမ်းလှမ်းမှုဖို့ရှိပါတယ်သမျှသောသူတို့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုဗတ္တိဇံဖို့ခရီးသွား. အမှန်တကယ်က၎င်း၏လူတို့နှင့်အတူ interactive တစ်ဦးမျှမပိုကောင်းလမ်းရှိပါတယ်, ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစား. အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယူပြီးတစ်ပင်ပိုကောင်းတယ့်နှင့်လမ်းလျှောက်မ.
Pack ကိုအလင်းပြီးတော့ Eco Friendly
ဒါဟာအလင်းထုပ်ပိုးအရေးကြောင်းတို့သည်ကြီးစွာသောအထငျမှားဖြစ်ပါသည်. အလင်းထုပ်ပိုးခြောတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Eco ဖော်ရွေခရီးသွားနိယာမ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွယ်တကူချမှတ်နိုင်ပြီးဒါဟာကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်. အဆိုပါပေါ့ပါးကျနော်တို့ဗူး, အဆိုပါပေါ့ပါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Modes သာလျော့နည်းလောင်စာသုံးစွဲမှုမှအလေးချိန်နှင့်ဤဘာသာပြန်ချက်များပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ခရီးသွား အဆိုပါခရီးသွားကိရိယာအစုံမှာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦး Eco ဖော်ရွေခရီးသွားကိရိယာအစုံတစ်ဝါးသွားတိုက်တံများဖြစ်နိုင်သည်ထားရှိရေးဦးမည်, ခေါင်းလျှော်ရည်အရက်ဆိုင်များနှင့်ဆပ်ပြာအရက်ဆိုင်အစားရေချိုးခန်း gels. သေးသေးလေး Shampoo & conditioner နှင့်အသုံးဝင်သောယိုဖိတ်မှုပြန်လည်သက်သေပြ tumblers. လူမီနီယမ်ရေပုလင်းများသည်သတ္တုကောက်ရိုးကဲ့သို့အရေးပါသည်.
များအတွက်အကြီးမားဆုံးခရီးသွားခေတ်ရေစီးကြောင်း 2020 အတွေ့အကြုံခရီးသွားခရီးသွားနိုင်ရန်နည်းလမ်းသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ပြ. ကျော်ရွှေ့, ကဂန္ထဝင်ဖြစ်ပါတယ်. အတွေ့အကြုံများအဘို့ဤကြောင့်အခန်းထဲမှာကြောင်းဟန်ပြယဉ်ကျေးမှု, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မြို့များသို့ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု.
ကတိပြုပေးသွင်း Choose ရေရှည်တည်တံ့သောခရီးသွား.
ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဂရုစိုက်ကျနော်တို့နယ်လှည့်များ၏အနုပညာကိုချစ်ပါလျှင်, ကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်, ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ သာ. စုပေါင်းကောငျးကြိုးအတှကျအရာတစ်ခုခုအားကာကွယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသွားယုတ်စေနှင့် Eco ခရီးသွားလုပ်ငန်း. အတူရထားခရီးစဉ်ကို booking အားဖြင့် Start တစ်ဦးကရထား Save, ယနေ့တွင်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “မည်သို့ရန်ခရီးသွား Eco Friendly ခုနှစ်တွင် 2020?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/travel-eco-friendly/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
EcoFriendlyTravel ခရီးသွားလုပ်ငန်း europetravel မြဝတီမြို့နယ် ပြည်သူပိုင် တာဝန်ယူမှု ရထားခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာသြစတြီးယား, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာဘယ်လ်ဂျီယံ, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်, ဥရောပခရီးသွား